muqdisho – Page 2
Articles by muqdisho
DAAWO: MD Axmed Karaash oo dhex tagay deegaankii Al-Shabaab laga saaray Af-Urur,dardaarana siiyay Ciidanka Puntland
June 12, 2019 muqdisho 0
Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland, Ahna Kusimaha Madaxweynaha Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo wefti ballaaran oo uu hogaaminayo oo safar shaqo ku gaaray degaanka Af-urur ayaa kormeeray ciidanka Daraawiishta Puntland ee ka hawlgala deegaankaasi. Kormeerka kadib
DEG DEG+DAAWO: Sarakiisha Ciidanka Puntland Oo Fariin Udiray Dhulbahantaha Ku Jira Somaliland & Taliska Muuse Biixi oo wal wal soo wajahay
June 12, 2019 muqdisho 7
Saraakiisha ciidanka Puntland Gaar Ahaan Taliyaha Qeybta 26 Aad ayaa ka hadlay Xaalada Gobolka Sanaag iyo Waliba maleeshiyaad Maamulka SNM Ka soo Goostay oo isku soo dhiibay Puntland. Dhanka kale saraakiisha Ayaa fariin u diray
DEG DEG: Dr. Bursaliid iyo dadkii lala xiray oo sabab La Yaab leh lagu sii daayay
Dowladda Kenya ayaa xalay Xabsiga ka siideysay Dr Ibraahim Faarax Bursaliid Bursaliid,kaas oo mudo 5 Cisho ah ugu xirnaa Xabsi ku yaalla Magalada Nairobi ee Caasimadda dalkaasi Kenya. 7-dii Bishaan ayaa Ciidamada Sirdoonka dalka Kenya
Ciidanka Sirdoonka Soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay labo dhalinyaro oo hubeysan kuwaasi oo damacsanaa iney qaarijitaan Guddoomiye ku-xigeenka amniga Maamulka Gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax. Labadan ruux oo ku hubeysnaa Bastoolado ayaa lagu qabtay dhabarka
DEG DEG+DAAWO: Wararkii ugu dambeeyay Xaaladda Gobolka Sanaag,Xaaladda Af-urur,Khilaafka Saadaq Joon & Taliye Ameeriko & Wararkii ugu dambeeyay Axmed Karaash
June 11, 2019 muqdisho 6
Waxaa sii xoogeysanaya khilaafka dhanka awoodda ku saleysan ee u dhaxeeya Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sareeye Guuto Bashiir Cabdi Maxamed (Ameeriko) iyo Saadaq Cumar Xasan (Saadaq Joon) oo ah taliyaha qeybta Booliska Gobolka Banaadir. Sida
June 11, 2019 muqdisho 4
Warar cusub ayaa ka soo baxaya ciidamo Somaliland ka soo goostay oo soo gaaray dhanka Puntland,kuwaasi oo eedeyn kulul u jeediyay Taliska Somaliland ee Muuse Biixi. Halkaan Hoose ka Daawo Wararkii ugu dambeeyay:-
June 11, 2019 muqdisho 1
Amar kasoo baxay Hay’adda Socdaalka Maamulka Puntland ayaa waxaa deegaanada Maamulkaas looga ceyriyay Saraakiil Ajaanib ah oo u Shaqeynayay laba Hay’adood oo ka howlgalla deegaanada Maamulkaas. Labada Hay’adood oo lagu kala Magacaabo World Vision iyo
June 11, 2019 muqdisho 0
Wararka laga helayo Gobolka Bari ayaa waxaa ay sheegayaan in saakay Ciidamada Dowlad goboleedka Puntland ay laba todobaad kadib ay dib ula wareegeen deegaanka Af-Urur oo ay dhawaan la wareegeen Ururka Al-Shabaab. Saraakiil ka tirsan
Fanaanka da’da yar ee Nimcaan Hillaac oo Xil culus looga magacaabay Dowladda Federaalka
DEG DEG+DAAWO: Waxgaradka & Saraakiisha Ciidanka G/Sanaag oo Go’aan halis ka gaaray duulaanka Ciidanka S/land & diyaargarow Xooggan oo socda
Wararka saakay naga soo gaarayo deegaanka Badhan ee Gobolka Sanaag ayaa sheegaya in halkaasi uu ka socdo shir Xasaasi ah oo ay leeyihiin Waxgaradka,Saraakiisha Ciidanka Puntland iyo Bulshada qeybaheeda kala duwan. Shirka ayaa diirada lagu
DAAWO: Labo Sarkaal oo muhiim u ahaa Al-Shabaab oo isku soo dhiibay DF & Xog La Yaab leh oo ay bixiyeen
Taliska Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gobolada Gedo iyo Jubbooyinka ayaa Maanta waxaa ay soo bandhigeen laba Sarkaal oo horay uga tirsanaa Al-Shabaab balse isku-soo dhiibay Ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya. Saraakiishaan ayaa la sheegay inay
June 10, 2019 muqdisho 0
DHAGEYSO: Madaxweyne oo runta ka sheegay sababta uu u tagi la’yahay magaalooyinka Muqdisho & Cadaado
XOG+DAAWO: Kenya oo ka Naxsan Go’aanka Maxkamada ICJ oo soo dhow & Muranka oo sii xoogeysan kara+Siyaasiyiin laga saarayo Nairobi
Xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay sii xoogeysato, xilli hadda uu soo dhawaaday waqtigii ay maxkamadda caalamiga ah ee caddaaladda go’aan kasoo saari lahayd muranka xadka badda ee
DEG DEG+DAAWO: Wararkii ugu dambeeyay xaalad deegaanka Af-Urur,Shabaab oo kala carar bilaabay & Ciidanka P/land oo ku dhow
Wararka naga soo gaaraya gobolka Bari ayaa ku warramaya in Ciidamada Puntland ay weerar ku yihiin deegaanka Af Urur ee gobolkaasi oo saacadihii la soo dhaafay ay qabsadeen dagaalyahanno ka tirsan Kooxda Al-Shabaab. Ciidanka Puntland
June 9, 2019 muqdisho 16
Odayaasha iyo Waxgaradka Gobolka Sanaag oo hadal kulul u jeediyey dowladda Federaalka kuna eedeyey in duulanka lagu hayo gobolka Sanaag iyo dagaalada ka jira ka aamus santahay. Gobolka Sanaag waxaa ka taagan Xiisad dagaal oo
DAAWO: DF oo wado qorshe ay kaga maarmeyso Ciidanka AMISOM? (Fursada Al-Shabaab & Daacish)
June 9, 2019 muqdisho 0
Awoodda ciidan ugu weyn ee hadda Soomaaliya ka jirta waa Ciidanka Midowga Afrika ee ku howlgala magaca (AMISOM),kuwaas oo dhaqaalo iyo taageero farsamo ka hela Qaramada Midoobay. Marar badan oo Waqtiga (Mandate-ka) ay Soomaaliya kaga
AKHRISO: Mgaacyada Guddiga Xuska Maalmaha Xoriytadda Somalia oo RW Kheyre magacaabay
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya (XFS) mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta magacaabay guddiga qaban qaabada xuska sannad guurada 59-aad ee maalmaha xorriyadda Soomaaliya ee 26-ka June iyo 1-da July. Guddigan ayaa ka kooban xubno
DEG DEG+DAAWO: Shabaab hore oo DF ay ka howl-galisay Muqdisho oo natiijo yaab leh keenay
Ku dhowaad 100 qof oo hore uga tirsanaa Al-Shabaab islamarkaana aan waxbadan moogeyn Kooxdaasi ayaa durba saameyn ballaaran ku yeeshay gudaha Ciidamada Booliiska Soomaaliya, sida ay xog ku heshay Caasimada Online. Raggan waxaa laga howlgeliyay
Wararkii u dambeeyey ee xaalada deegaanka Af-Urur oo ay Al-Shabaab la wareegeen
Al-Shabaab ayaa shalay gelinkii hore, iyadoo aan wax dagaal ah ka dhicin la wareegay gacan ku haynta tuulada Af-urur oo qiyaastii 90 Km dhinaca Koonfureed kaga beegan magaaladda Boosaaso, xarunta gobolka Bari ee Puntland. La